RASMI: Juventus oo ku dhawaaqday in heshiis cusub ee waqti dheer ay ka saxiixatay difaaceeda Alex Sandro – Gool FM
(Juventus) 20 Dis 2018. Juventus ayaa shaaca kaga qaaday boggeeda rasmiga ah ee “Twitter-ka” in ay heshiis cusub ee waqti dheer ay ka saxiixatay difaaca kooxdeeda ee reer Brazil Alex Sandro.
Kooxda Bianconeri ayaa wadada kasoo xirtay dhamaan kooxaha waaweyn ee qaarada yurub, kuwaasoo doonayay inay la saxiixdaan Alex Sandro, kadib markii ay The Old Lady ay ka saxiixatay ciyaaryahanka reer Brazil heshiis gaaraya ilaa iyo 2023.
Kooxda reer Talyaani ayaa war rasmi ah ay soo saartay waxay ku xaqiijisay in 27 jirka reer Brazil uu qalinka ku duugay heshiis ilaa iyo 2023, kaasoo uu ku qaadan doono sanadkii ilaa iyo 5 milyan oo euros.
Alex Sandro.ayaa 134 kulan u ciyaaray kooxda Juventus ee ah dhamaan tartamada kala duwa, isagoo dhaliyay 9 gool, wuxuuna sidoo kale sameeyay 18 gool caawineed.
Waxaa xusid mudan inay jiraan kooxo fara badan ee qaarada yurub ee si aad ah u xiiseenayay saxiixa Alex Sandro, waxaana ka mid ah sida kooxaha reer Egland ee Manchester United iyo Chelsea.
Shaxda la filayo inay yeelan doonto Manchester United hadii uu Zidane la wareego shaqada tababarka
“Real Madrid waxay i siisay qeyb ka mid ah waqtiyadii ugu fiicnaa nolosheyda” - Mbappe